किन ओझेलमा ला मासिया ? - Khelpati
शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७ शाम्भब ढकाल
एजेन्सी । बार्सिलोनाको मुल मन्त्र हो, ‘मेस क्वि अन क्लब’ ।
यसलाई सरल रुपमा अनुवाद गर्दा बार्सा केबल एक क्लब मात्र होईन, यो ‘मोर दयान क्लब हो ।’
बार्सिलोनाले प्राप्त गरेको सफलताले क्लब स्पेनमा मात्र नभएर विश्वमानै प्रसिद्ध छ । क्लबको सफलतामा युथ एकेडेमी ‘ला मासिया’को महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
एकातिर बार्सिलोनाको पछिल्लो खराब प्रर्दशन र अर्कोतर्फ ला मासियाबाट पहिलो टिममा युवा खेलाडीको कमी आउनु संयोग मात्र होला त ?
के हो त ला मासिया ?
ला मासिया बार्सिलोनाको सिद्धान्त र प्रशिक्षण शिक्षाको समष्टिगत स्वरुप हो । ला मासियालाई बार्सिलोनाको युथ एकाडेमी भनिन्छ । यसमा बिभिन्न उमेर समूहका खेलाडीले फूटबलका साथै अन्य विषयको शिक्षा आर्जन गर्छन् ।
यसको स्थापना सन् १९७९ मा भएको हो । सन् १९८८ योहान क्रुफको बार्सिलोना प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्तिपछि यो विश्वमानै प्रसिद्ध युथ एकेडेमीको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
बार्सिलोनाको सन् २००८ पछि प्राप्त गरेको सफलतामा ला मासियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी लियोनल मेस्सी पनि ला मासियाकै उत्पादन हुन् ।
मेस्सी सहित कार्लोस पुयोल, भिक्टोर भाल्डेज, जाभी हर्नान्डेज, आन्द्रे इनिष्टा, बुस्केट जस्ता चर्चित खेलाडी ला मासियाकै उत्पादन हुन् ।
सन् २०१० को वालेन डी ओरको पुरस्कारमा शीर्ष ३ जना खेलाडीमा परेका मेस्सी, जाभी र इनिष्टा ला मासियाकै उत्पादन थिए । स्पेनको सन् २०१० को विश्वकपको उपाधि उचाल्दा ९ जना खेलाडी ला मासियाकै उत्पादन थिए ।
सन् २००४ देखि विश्व प्रसिद्ध वालेन डी ओर पुरस्कारकाे शीर्ष ३ मा सधै ला मासियाकै उपस्थिती हुने गर्दछ ।
तर पछिल्लो समय ला मासियाबाट पहिलो टिममा खेल्ने राम्रा खेलाडी उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ ।
सन् २०१९-२० को बार्सिलोनाको टिममा २९ खेलाडी थिए, जसमध्ये १२ खेलाडी ला मासियाका उत्पादित थिए । यद्यपि ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका पहिलो टिमका नियमित खेलाडीमा सर्जी रोबर्टो र राफिन्हाले मात्र ३२ भन्दा बढि खेलमा सहभागी भएका थिए ।
सन् २०१२ मा ला मासियाका जोर्डी आल्बापछि सर्जी रोबर्टो र राफिन्हा मात्र बार्सिलोनाका लागि सय भन्दा बढी खेलमा सहभागी हुन सफल भएका छन् ।
पछिल्लो दशक विभिन्न कारणले ला मासियामा उत्पादित खेलाडी ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
पहिलो कारणको रुपमा क्लबले खेलाडीलाई लोन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नसक्नुलाई लिईएको हो ।
सामान्य रुपमा क्लब एकेडेमीमा १९ वर्ष भन्दा कम उमेरका खेलाडी मध्य १० प्रतिशत खेलाडी पहिलो टिममा खेल्ने, ४० प्रतिशत खेलाडीलाई लोनमा अर्को क्लबबाट खेल्ने मौका दिने र बाँकी ५० प्रतिशत खेलाडीलाई बाहिर निकाल्दै नयाँ खेलाडी भर्ना गर्ने गरिन्छ ।
तर बार्सिलोनाले खेलाडीलाई बाहिर निकाल्न नसक्दा गत वर्ष ३६ जना १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका थिए । यस्तै, २२ जना १९ वर्ष भन्दा कम उमेर र २४ जना बी टिममा रहेका थिए । धेरै खेलाडीको संख्याले सबैले खेलमा सहभागी हुन पाएका छैनन्, जसको असर युवा खेलाडी उत्पादनमा परेको छ ।
दोस्रो कारणको रुपमा बार्सिलोना आफ्नो सफलताको आफै सिकार भएको मानिन्छ । सन् २००८ पछि ‘टिकी–टाका गोल्डेन जेनेरेसन’का जाभी, इनिष्ट, जेरार्ड पीके, वुस्केट जस्ता खेलाडीलाई पहिलो टिममा खेल्न पार गर्ने बाटो अहिलेको भन्दा निकै सहज थियो ।
त्यस पुस्ताका खेलाडीले बार्सिलोनालाई निकै सफल क्लब बनाए । अब पहिलो टिमबाट खेल्न युवा खेलाडी निकै उत्कृष्ट हुनुपर्छ । युवा खेलाडीले गल्ती गर्नु स्वभाविक हो तर बार्सिलोनामा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नयाँ खेलाडीको परिक्षण हुने सम्भावनानै रहदैन ।
तेस्रो कारणको रुपमा बार्सिलोना प्रकृयामुखी भन्दा बढी नतिजामुखी देखिएको आरोप लाग्छ ।
ला मासियाको सिद्धान्त थ्री पीमा आधारित छ । अर्थात पोसेसन्, पोजिसन् र प्रेसिङ्ग । तर पछिल्लो समय ला मासियाले सिद्धान्त त्याग्दै बढि नतिजामुखि बन्दै गएको देखिन्छ । छोटो समयको नतिजालाई ध्यान दिएर युथ टिममा पनि बाहिरी खेलाडी खरिद गर्दा ला मासियाकै युवाले खेल्ने मौका कम भएको देखिन्छ ।
पेप ग्वार्डीओला बार्सिलोना प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त हुदाँ उनले २८ जना ला मासियाकै युवालाई पहिलो टिममा खेल्ने मौका दिएका थिए । तर सन् २०१२ मा उनले बार्सिलोना छाडेपछि पहिलो टिममा आउने संख्यामा पनि निकै कमी हुन थाल्यो ।
लुईस एनरिके र इर्नेस्टो भालभर्डेको कार्यकालमा पनि ला मासियाबाट खासै पहिलो टिममा खेलाडी आएनन् । भालभर्डेको कार्यकालमा सन् २०१८ मा ईतिहासमै पहिलो पटक बार्सिलोनाको ११ खेलाडी मध्य कुनैपनि खेलाडी ला मासियाका उत्पादन थिएनन् ।
चौथो कारण पैसाको प्रभावलाई मानिएको छ । फुटबलमा पैसाको चलखेल निकै बढेको छ । खेलाडीका एजेन्टले एकबाट अर्को क्लब सरुवा गर्दा पाउने कमिशन र खेलाडीमा पैसाले पार्ने प्रभावले ला मासियाका युवा खेलाडीलाई अरु क्लबले खोस्ने गरेका छन् । यसको एक उदाहरणको रुपमा एरिक गार्सियाको म्यान्चेस्टर सिटीमा भएको सरुवालाई हेर्न सकिन्छ ।
पाँचौ कारण क्लबको राजनीतिलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ । बार्सिलोनाको अध्यक्षको चुनावमा लोकप्रिय उम्मेदवार बन्न महङ्गोमा खेलाडी खरिदको होडबाजी चल्छ । अहिलेका अध्यक्ष जासेप बर्टोमेउले पनि कीर्तिमानी मुल्यमा उसमान डेम्बेले, फिलिप कौटिन्हो र एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई क्लबमा भित्र्याएका थिए । ठुला मूल्यका स्टार खेलाडी मैदान उतार्ने दबाब प्रशिक्षकलाई हुन्छ । जसका कारण युवा खेलाडीले कम अवसर पाउँछन् ।